Imikhiqizo factory, abahlinzeki - China Imikhiqizo Abenzi
I-pigment emhlophe yokuvikela ukungcoliswa kwemvelo enobungane, ingxenye eyinhloko i-aluminium tripolyphosphate nezinto zayo eziguquliwe, ukubukeka kuyimpuphu ye-hoar, ukuminyana okungu-2.0-3g / cm, okungenabuthi, akuqukethe i-chromium nezinye izinsimbi eziyingozi, ukunamathela okuhle nokumelana nomthelela,
I-Compound Ferro-Titanium Powder uhlobo lwe-non-toxic, ayinambitheki, isizukulwane esisha semvelo enobungako be-anti-rust pigment. sebenzisa i-compound entsha ne-nanotechnology futhi ngokusebenza kwezindleko eziphezulu.
Isingeniso somkhiqizo Uhlobo lomkhiqizo NOELSON TM Inkomba yamakhemikhali neyomzimba Ukusebenza komkhiqizo nohlelo ► ► ► Insizakalo yezobuchwepheshe nezebhizinisi Njengamanje singumhlinzeki we-Transparent iron oxide, imikhiqizo yethu yamukelwe futhi yamukelwa izinkampani eziningi zomhlaba wonke. Ngaphandle kwemikhiqizo enikeziwe, sihlinzeka ngosizo oluphelele noluzungezile lobuchwepheshe, lwamakhasimende kanye nolokusebenza kuwo wonke amaklayenti. Ukupakisha 25kgs / isikhwama noma 1ton / isikhwama, 18tons / 20'FCL.